Ungawuthola kanjani umculo kumavidiyo e-YouTube | Kusuka kuLinux
Uma ungumthandi womculo, mhlawumbe ubuke iphuzu elithile enye indlela yokulanda umculo kumavidiyo e-YouTube. Sikwethulela okusebenza njengentelezi.
Uma uthanda ukulalela umculo ku-YouTube noma kuVimeo, kepha ufuna ukukwenza ungaxhunyiwe ku-inthanethi noma kwisidlali sakho esiphathekayo, leli thuluzi lingaba nentshisekelo enkulu. Kukangaki sifuna ukulalela umsindo we-movie futhi sikwazi ukuwugcina kulabhulali yethu yomculo?
1 Youtube ukuze mp3
2 Iskripthi esilula
Youtube ukuze mp3
I-MediaHuman YouTube ku-MP3 Converter iyindlela engcono kakhulu kubasebenzisi be-Ubuntu. Le software ekhangayo kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ikuvumela ukuthi ukhiphe amathrekhi omsindo kumavidiyo e-YouTube nakuhlu lwadlalwayo lwe-YouTube ngekhwalithi ephezulu kakhulu.
Ukufakwa en Ubuntu 12.04 nokulandelayo:
sudo apt-get ukufaka i-youtube-to-mp3
Labo abasebenzisa i-lighter distros nakanjani bazokhetha usizo lombhalo ukufeza lo msebenzi omuhle kangaka.
Ku-Arch nakwezinye izinto, kungenzeka ukulanda umabhebhana o i-youtube-zenity kusuka ku-AUR. Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu, uma kufakiwe, vele usebenzise iskripthi esinegama elifanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungawulanda kanjani umculo kumavidiyo we-Youtube
UDuván Ballén Rodríguez kusho
Akuyona phakathi kwamakhosombe e-Ubuntu 13.04….
Phendula uDuván Ballén Rodríguez
Ungalanda umculo futhi namavidiyo avela ku-youtube nakwamanye amawebhusayithi ngaphandle kwezinhlelo kalula .. vula ividiyo naku-URL ngaphambi kwegama elithi youtube engeza »DL» bese ukhetha i-mp3 noma ividiyo bese ulanda
Kukhona enye indlela ebonakala ilula kimi, vula ividiyo ye-youtube ofuna ukuyilanda bese uyengeza »dl» ngaphambi kwe-URL ye-youtube futhi uzobona inketho yokukhetha ikhwalithi yokulanda, futhi uzoba nenketho yokulanda njenge mp3 umsindo 😉
Nge-Jdowloader nayo ingenziwa, into embi ukuthi kuvidiyo ngehlisa ivolumu. Yiba nayo uma isebenza kanjena
Enye into, ukusiza abasebenzisi be-novice, kuzoba wusizo kakhulu uma unikeza i-apt: youtube-to-mp3 njengesixhumanisi sokufaka uhlelo. Bayazonda ukuphela futhi bayikusasa
clipgrab kubonakala kulula, akudingekile ukubeka isixhumanisi ngokusesha ngesihloko ongakwenza
Ingitshela (nge-12.04) ukuthi "iphakethe le-Youtube-to-mp3 belingatholakali"
I-Octavio Ortega kusho
Angifaki lutho, ngisebenzisa iwebhu http://www.vidtomp3.com
Kule webhusayithi unesifundo esincane, kepha kulula njengokubeka i-url yevidiyo nokulanda i-mp3.
Phendula ku-Octavio Ortega
UHector Rene Kruger kusho
Ngokwandiswa kweFirefox, Umsizi Wokulanda Ividiyo ungalanda futhi uguqule amavidiyo abe amafomethi ahlukahlukene atholakalayo.
Phendula uHector Rene Kruger
UDiego Avila kusho
Kusesitolo, kufanele udale i-akhawunti ye-Ubuntu ngoba kufanele ufake eminye imininingwane, kepha isemahhala.
Phendula u-Diego Avila
Yebo, kukhona nezinye izindlela eziku-inthanethi. Ingabe enye inketho.
Yebo, kungenye indlela enhle kakhulu
Enye indlela kungale webhusayithi, umane unamathisela i-URL yevidiyo bese uyilayisha uma isilungile ngoba iyiwebhusayithi efanayo ebhekele ukuyiguqula
Uma kwenzeka noma ngubani enentshisekelo eyodwa yesiginali:
I-sudo pacman -S i-youtube-dl
sudo apt-get ukufaka i-youtube-dl
Sanibonani mphakathi !!!
Kubi ukungitshela ukuthi iphakethe alitholakali, ngisebenzisa i-Linux MInt 13… kepha okokufaka kuyaziswa.
Nali ikhasi lapho ungaguqula ividiyo ibe ngomsindo, kimi enhle kakhulu futhi enokwethenjelwa kakhulu .. »Ngigcizelela ukuthi ingeyamavidiyo we-YouTube kuphela futhi angeke asetshenziswe namanye amawebhusayithi».
Ngisebenzisa iClipgrab futhi anginankinga 🙂
UFernando Merino kusho
Ngithande indawo yokugcina lapho usebenzisa khona imiyalo, uyisebenzisa kanjani?
Siyabonga ngolwazi. KwiFedora akusebenzi.
Phendula uFernando Merino
Kungenzeka kungasebenzi ngoba i-athikili isivele ineminyaka engu-2 ubudala futhi i-YouTube yenze izinguquko eziningana ekhasini layo.
satta matka kusho
Kungenzeka kungasebenzi ngoba i-athikili isivele ineminyaka engu-2 ubudala futhi i-YouTube yenze eziningana
Phendula ku-satta matka
ukuqagela kwe-satta kusho
hey Kungenzeka ukuthi ayisebenzi ngoba i-athikili isivele ineminyaka engu-2 ubudala futhi i-Youtube yenze izinguquko eziningana ekhasini layo.
Phendula kumatta matka ukuqagela
Kimi kusho (nge-12.04) ukuthi «Ayikwazanga ukuthola iphakethe le-Youtube-to-mp3